Isaziso sewijethi yesikrini, ukuvala izaziso zescreen | I-Androidsis
Namhlanje ndikuzisela esinye isicelo esinomdla sokufumana eyakho izaziso ngqo kwi isikrini esivaliweyo kwisixhobo sethu se-Android.
Isicelo, inokwenzeka njani enye into, sinokuzikhuphela simahla yeyakho Play Store.
Ukuze ukwazi ukufaka Isaziso seWidget Kuya kufuneka sibenesiphelo sendlela Android 4.0 okanye ngaphezulu.
Isaziso sewijethi yesikrini iyakwazi ukusibonisa Zonke izaziso yesixhobo kwaye ayikhawulelwanga njengezinye izicelo zesitayile, ukwazisa kuphela ii-imeyile, iSMS okanye iifowuni eziphosiweyo.
Esi sicelo siza kusibonisa ngokwaso isikrini esivaliweyo, Zonke izaziso esizifumana kwisiphelo sendlela nangexesha lokwenyani, ikwasivumela ukuba siqhagamshelane nabo ngqo ngaphandle kokuvula isixhobo.
Enye yeempawu endizithandayo kakhulu kuyilo lwayo oluhlaziyiweyo kwisitayile senkqubo yezaziso zenguqulo ye Android 4.2, apho uyilo oluhle, lusivumela ngokusebenzisa Isicatshulwa esincinci esivela kwisaziso fumana umxholo womyalezo.
Uhlobo lwe-Android 4.2
Iwotshi Smart kwisitayile se-Android 4.2
Izaziso zazo zonke izicelo, i-WhatsApp, i-Line, i-Viber, i-Apalabrados, i-Spotbros, njl.
Ivumela iintshukumo ezenziweyo kwisaziso esifunyenweyo, njengokugcina i-imeyile, ukubuyisela umnxeba, ukuphendula i-SMS, njl.
Izinketho zokwandisa isaziso kwiscreen sokutshixa ngokwaso, njengakwinguqulelo ye-Android 4.2.2.
Isikrini esizenzekelayo xa sifumana isaziso, ngaphandle kwaxa i-terminal isepokothweni okanye inzwa yokusondela egutyungelweyo.
Isicelo esinomdla apho zikhona, zingasasebenzi kwaye ziyilwe ngononophelo ngokugqithileyo, ezenza into ekulindeleke ukuba ziyenze, sibonise izaziso ezifunyenwe ngqo kwi isikrini esivaliweyo ukusuka kwisiphelo sethu Android, akukho ngaphezulu kungekho ngaphantsi!
Iinkcukacha ezithe xaxe - Uyikhuphelela njani kwaye uyifaka njani inguqulelo entsha yeVenkile yokuDlala eyi-4.0.25
Khuphela - Isaziso seLockScreen Widget simahla kwiVenkile yokudlala
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Izaziso kwisikrini sakho sokukhiya ngeSaziso seWidget yeSaziso
Kwi-Android 4.1.2 ayisebenzi kwaye ikubonisa isilumkiso sokuba awukwazi ukufaka iiwijethi kwiscreen sokutshixa.
inokusuka kuphela kwi-android 4.2 ukubheka phambili
ewe, kuya kufuneka ukhuphele isikrini sewidlocklocker.
Molweni bahlobo bam abathandekayo. Umnqa omkhulu! Andikwazi kulinda ukwabelana ngamava am okuthenga nge-intanethi nawe.
Ndilapha ukuza kukunika ixabiso elimnandi nge-Samsung Galaxy S3 i9300. Ndichithe kuphela i-99,99 €. Ndithenge le fowuni imangalisayo, yonke into igqibelele. Ndimele nditsho ukuba le yeyona mpumelelo yam ibalaseleyo kwaye iyonelisa ngamava okuthenga kwi-Intanethi. Uyazi, i-Samsung Galaxy S3 i9300 ithandwa kakhulu, phantse wonke umntu uyayisebenzisa. bonke abahlobo bam basebenzisa i-ultra-thin, i-8MP, isikrini esikhulu, i-Smartphone enobume bendalo. Ndinomona kwaye ndihlala ndifuna ukuthenga le fowuni, kodwa kuyabiza kakhulu kwivenkile yokwenyani. Kodwa wayenethamsanqa, ndabona ifowuni efanelekileyo kwiforum, andithandabuzi ukuyithenga.
Okokuqala, ifowuni ilungile, i-atmosfera kakhulu, i-ultra-thin, i-8MP. Isantya? Intanethi, dlala umdlalo nangcono.
Okwesibini, le mobile phone i9300 yeyona inexabiso eliphantsi emhlabeni. Umgangatho ulunge kakhulu, ngokuchanekileyo iimpawu ezifanayo nomthengisi, kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo, ixabiso eliphantsi, inkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa. Ixabiso elipheleleyo lemali.
Okwesithathu, singafumana isipho kumthengisi, ndibone uninzi lwabahlobo bam bathenga le fowuni, kwaye badumisa ivenkile.
Okwesine, ixesha lokuqala lokuthenga iifowuni eziphathwayo kwi-intanethi, khange ndilindele ukuba zilunge, zigude, ndiyithanda kakhulu le fowuni! egqibeleleyo, amava okuthenga amnandi kakhulu. Iinyani zibonisile ukuba ndenze isigqibo esifanelekileyo, sisigqibo esigqibeleleyo! Xa ufika, yisebenzise, ​​uya kuba nemvakalelo efanayo neyam. Ndiyakuqinisekisa ukuba baya kuyithanda.
Zininzi izibonelelo, kangangokuba basathandabuza ntoni? Izinto ezintle zokwabelana nawe, izolo ndithenge ezimbini ezi i-mobiles ze-i9300 ukuba ndizinike abantakwethu noodadewethu, abathanda kakhulu. Okubaluleke ngakumbi, ivenkile ngoku ibandakanyeka kwimisebenzi yokwazisa, kukho isaphulelo sama-90% kwiintsuku ezili-10, ngoku kufuneka sisebenzise nje i- € 99,99, unokwenza ifowuni efanelekileyo, ulinde ntoni? Ungaphoswa leli thuba libalaseleyo, kulungile, kholwa ndim.
I-Sony Xperia P, E kunye no-Go, uhlaziyo olulandelayo kwi-Android 4.1 Jelly Bean